Shina: Ento Any Amin’ny Faritra Ambanivohitra Ireo Bokinao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2011 12:01 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Português, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, Aymara, বাংলা, 日本語, English
Ilay fanentanana tselatra dia narindra avy tamin'ny kaonty Weibo iray @随手送书下乡 [zh], ny dikany dia “Ento ho any ambanivohitra ny bokinao”. [zh]. Ity ny fiantsoana [zh] ireo mpilatsaka an-tsitrapo tamin'ny 4 May, 2011″:
Amin'izao dia mandray mpilatsaka an-tsitrapo manerana ny firenena izahay. Ny andraikiny dia ny :
1. Mandamina ireo mpilatsaka an-tsitrapo hanangona ireo boky avy amin'ireo malala-tanana rehefa fotoam-pialantsasatra ary hampiditra ireo boky ho anaty lisitra ;
2. Mandrindra ny fanaterana ireo boky voaangona any amin'ny tanàna akaiky ; …
3. Hanome ny vokatry ny fanaraha-maso ho an'ireo fikambanana na ny olona izay tompon'andraikitra amin'ny fizaràna ireo boky natolotra ;
4. Mandamina ireo mponin'ny aterineto hampiantrano fianarana mamaky teny any ambanivohitra ;
5. Mikarakara ireo ankizy izay miasa any an-drenivohitra tahaka ny mpiasa mpifindra monina ny Ray aman-dreniny.
Azafady mba andefaso hafatra manokana aho raha liana amin'izany ianao.
Tao anaty ny roa andro, ny toeram-pifandraisana ao Beijing dia nahazo fonosam-boky telo:
Mba tsy hampisy fandàniana amin'ny fitaterana, @bring your books to the villages (na ento any ambanivohitra ireo bokinao) dia nanentana ireo mpanohana azy [zh] :
Miarahaba, misaotra betsaka tamin'ny fanohanana. Mba hitsitsiana ny vola lany amin'ny paositra, azafady manangàna toerana iray
hifandraisana any amin'ny faritra misy anareo mba :
1. Hanangonana ny boky;
2. Hifandraisana amin'ireo namana vonona hanampy hanangana trano famakiam-boky any an-tanàna;
3. Hametraka toerana ifandraisana ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo izay vonona ny hizara ireo boky any an-tanàna.
Heverinao ve fa azo tanterahana izany tetikasa izany?
Haingana be tao antin'ny 5 andro, Toeram-pifandraisana maro no voatsangana : Beijing [zh], Chongqin [zh]; Changsha [zh]; Guangzhou [zh] ary Wuhan [zh]. Nanangana QQ groups maro ihany koa ireo mpilatsaka an-tsitrapo[zh] handaminana ny fandraisana sy ny fizarana ireo boky.
Ny vondron'ny mponina ao amin'ny aterineto @bring your books to the villages na @Ento any an-tanàna ireo bokinao avy eo dia nanao ny fanentanany tselatra voalohany [zh] ho amin'ny fizaràna boky tao an-tanànan'i Dabei, fari-pididian'i Shunping, Hebei tamin'ny 15 May 2011. Maherin'ny 30 ireo mpilatsaka an-tsitrapo nandray anjara tamin'ilay fanentanana tselatra. Iray amin'ireny i @Sesehou.
Indro sary iray [zh] mampiseho ny efitrano famakiam-boky iray ao an-tanàna :
Wang Qiang nampakatra sarin'ireo mpikambana tamin'ilay fizarana boky voalohany tao amin'ny kaontiny Weibo :
Vetivety tao aorian'ilay asa fizarana boky voalohany, @bring your books to the villages (Ento any ambanivohitra ireo bokinao) dia nanao antso fanentanana iray hafa [zh] mba hanangonàna boky ny 21-22 May tao amin'ny hotely iray ao Beijing. Ilay fikambanana nahangona boky miisa 1600 [zh] tao anatin'ny roa andro :
Ankoatran'ny fanaovana fanentanana tselatra, @bring your books to the villages dia nanokatraa kaonty amin'ny banky koa [zh] hanangona fanomezana hananganana trano famakiam-boky any an-tanàna rehetra any. Ny fanomezana tsirairay dia notaterina ho an'ny daholobe amin'ny alalan'ny kaonty ofisialy Weibo.
Nanomboka tamin'ny fametrahana ny kaonty Weibo ofisialy ny 3 May 2011, @bring your books, na ho ento ireo bokinao dia nikarakara hetsika fanentanana tselatra ho fanagonam-boky ary asa fanomezana tamin'ny faritra sasany amin'ny tanàna saika isaky ny faran'ny herinandro. Tao anatin'ny telo volana latsaka, nahavita nametraka toeram-pifandraisana 33 [zh] ny vondron'ny mponin'ny aterineto ho fanangonam-boky ary trano famakiam-boky 11 [zh] tany amin'ny faritra ambanivohitra.
Ny tatitra ara-bolan’ ny fikambanana ny Jolay 2011 dia nampiseho fa hatreto ny fitambaran'ny fanomezana dia RMB 87858.38 [zh] , avy amin'ireo mponin'ny aterineto.